Xaalufka koonfurta bari ee Spain wuu ka sii dari karaa sanadaha soo socda | Saadaasha Shabakadda
Xaalufka koonfurta bari ee Spain wuu ka sii dari karaa sanadaha soo socda
Gobolka Mediterranean ayaa ka mid ah meelaha ugu nugul xaalufka. Abaaro xoogan oo waqti dheer soconaya, roobab mahiigaan ah oo si tartiib tartiib ah u burburinaya lakabka sare ee carrada, soo bandhigaya sariirta, iyadoo aan la ilaawin ka faa’iideysiga beeraha iyo xoolaha, ayaa sababaya saameynta kuleylka adduunka in si xoog leh looga dareemo aaggan. adduunka qayb ka mid ah.
Dhibaatadu way ka sii dari kartaa xitaa sannadaha soo socda, waxayna si gaar ah u saameyn kartaa gobolka Mar Menor.
1 Waa maxay xaalufku?
2 Wax ma laga qaban karaa si looga hortago?
Waa maxay xaalufku?
Xaalufid waa geedi socod ciqaab joogto ah oo ka dhalanaysa kala duwanaanshaha cimilada iyo dhaqdhaqaaqa aadanaha. Tani waa dhibaato sii fideysa markii heer kulka adduunka uu kaco, taas oo kaliya xaalada ka dhigeysa mid ka sii daraysa dadka si uun uga faa’iideystay dhulkaas.
Si kastaba ha noqotee, tirada dadka ayaa sii kordheysa, sida baahida loo qabo guryaha, cuntada, iwm, sidaa darteed xaalufinta, wasakheynta kiimikada, uruurinta dhaqdhaqaaqa dhaqaale ee aagagga xeebta, howlaha warshadaha, dalxiiska, iyo wax kasta oo lagu daro wixii aan ka wada hadalnay bilowgii maqaalka waxay culeys weyn saarayaan kheyraadka dabiiciga.
Wax ma laga qaban karaa si looga hortago?
Shaki kuma jiro. Erayada José Antonio Sánchez, wakiilka Kulliyadda rasmiga ah ee cilmiga dhulka ee Murcia ilaa War Saxaafadeedka Europa, mid ka mid ah waxyaabaha la qaban karay ayaa ah "in la isku duwo maareynta dhulka iyo kheyraadka biyaha si looga ilaaliyo carrada nabaad guurka, milixda iyo noocyada kale ee xaalufinta, iyo sidoo kale in la ilaaliyo daboolka dhirta."
Intaas waxaa sii dheer, waxay soo jeedineysaa in lala socdo lana xakameeyo geeddi-socodka dhiig-miirashada biyaha, tayada biyaha dhulka hoostiisa, marka laga reebo dhiraynta si looga fogaado nabaad-guurka carrada.
Tallaabooyinkan, saxaraha ayaa lagu joojin karaa, keliya Spain, laakiin sidoo kale adduunka intiisa kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha Shabakadda » Saadaalin » Xaalufka koonfurta bari ee Spain wuu ka sii dari karaa sanadaha soo socda
Reer yurubiyanku ma rumeysna in isbedelka cimilada ay tahay wax dad samee